‘ज्यान बचाइदिनु’ भन्दै प्रधानमन्त्री गुहार्दा पनि बाँचिनन् गीता : रञ्जन छुटेपछि गीताका वृद्ध बुवा भन्छन्, ‘अब हाम्रो सुरक्षा कस्ले गर्छ’ ? (भिडियो हेर्नुस्) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/‘ज्यान बचाइदिनु’ भन्दै प्रधानमन्त्री गुहार्दा पनि बाँचिनन् गीता : रञ्जन छुटेपछि गीताका वृद्ध बुवा भन्छन्, ‘अब हाम्रो सुरक्षा कस्ले गर्छ’ ? (भिडियो हेर्नुस्)
‘ज्यान बचाइदिनु’ भन्दै प्रधानमन्त्री गुहार्दा पनि बाँचिनन् गीता : रञ्जन छुटेपछि गीताका वृद्ध बुवा भन्छन्, ‘अब हाम्रो सुरक्षा कस्ले गर्छ’ ? (भिडियो हेर्नुस्)
निधन हुनुभन्दा ९ दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्यान सुरक्षाको माग गर्दे उजुरी दिएकी गीताको श्रीमान रञ्जन कोइरालाले ह त्या गरे । उनलाई श्रीमानले पहिला देखि नै तेरो शव गायब बनाउछु भनेर भन्ने गरेको गीताका बुवाले बताएका छन् । उनले पुष १८ गते गीताले ज्यानको सुरक्षा पाउँ भन्दै शसस्त्र प्रहरी प्रमुख र गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ को उपाधि हात पारेका किरण गजमेर जस्को आफ्नो देश छैन